फ्राइडे फिल्म : घामड शेरे र जीवन काँडा कि फूल – News Dainik
News desk २२ कार्तिक २०७६, शुक्रबार ०९:३३ मनॊरञ्जन प्रतिकृया दिनुहॊस
काठमाडौं । आज कात्तिक २२ गते शुक्रबार दुई नेपाली चलचित्रहरुको भिडन्त हुने भएको छ । बि.सि. मोशन पिक्चर्शको ब्यानरमा निर्माण तथा निर्देशक हेमराज बि.सि. को निर्देशन रहेको नेपाली कथानक चलचित्र ‘घामड शेरे’ र निर्देशक बिनोद बिस्टद्वारा झमक कुमारी घिमिरेको जीवनीमा आधारित चलचित्र ‘जीवन काँडा कि फूल’ चलचित्र आज देशभर प्रदर्शनमा आउन लागेको छ ।
अघिल्लॊ देवघाटधाम र चित्रसारीमा एकादशी मेला
पछिल्लॊ मलेसियामा एक नेपालीको मृत्यु